Friday,7Jun, 2019 3:29 PM
काठमाडौँ, २४ जेठ - हे मनमोहक पर्वतमाला ! गौरवशाली उच्च हिमाल !
नाटकका रचयिता शीतविन्दु विगतको इतिहासलाई बिर्सिएमा भविष्य नबन्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “इतिहास बिर्सने राष्ट्रको भविष्य सम्भव छैन ।”
गीतिनाटकको निर्देशन वीरेन्द्र हमालले गर्नुभएको थियो । नाटकमा नृत्य निर्देशन गोरन चौधरी र सहनृत्य सवनम सिलवालको थियो ।
रासस /मीना घोरसाइने